Imbali ye-Computer Mouse
Kwakuyimboniso yezobuchwepheshe kunye nomqambi uDouglas Engelbart (ngoJanuwari 30, 1925 - ngoJulayi 2, 2013) owaguqula indlela iikhompyutheni ezisebenza ngayo, ukuguqula kwisicatshulwa soomatshini obukhethekileyo kuphela ososayensi oqeqeshiweyo angayisebenzisa kwisixhobo esinobuchule esinobuchule malunga nantoni na no ku sebenza. Ngethuba lokuphila kwakhe, waqulunqa okanye wenza igalelo kwiinkqubo ezininzi ezinokusebenzisana kunye nomsebenzisi njengomdla wekhompyutheni, inkqubo ye-Windows, i-computer ye-teleconferencing, i-hypermedia, i-groupware, i-imeyile, i- intanethi kunye nokunye.
Ukwenza i-Computing Less Cumbersome
Uninzi lwazo, nangona kunjalo, wayeyaziwa ngokuqulunqa imouse yekhompyutha. U-Engelbart wakhulelwa kwisigxina se-mouse xa wayeya kwinkomfa kwimifanekiso yekhompyutheni, apho waqala ukucinga malunga nendlela yokuphucula i-computer esebenzayo. Kwiintsuku zokuqala zekhompyutha, abasebenzisi abakhombise ikhowudi kunye nemiyalelo yokwenza izinto zenzeke kwiindwendwe. U-Engelbart wacinga indlela elula kukukudibanisa isikhombisi sekhompyutheni kwisixhobo esinamasondo amabini-enye inqamlezileyo kunye neyodwa. Ukuhambisa ifowuni kwindawo ejikelezayo kuya kuvumela umsebenzisi ukubeka isikhombisi kwisikrini.
Umqeshi we-Engelbart kwiprojekthi ye-mouse Yilwayo yesiNgesi yakha umboniso-isicatshulwa ngesandla esicatshulwa ngemithi, kunye neqhosha phezulu. Ngowe-1967, inkampani ye-Engelbart ye-SRI ifake i- patent kwimouse , nangona iifayili zichanele ngokungafaniyo ngokuthi "x, y yesikhombisi sendawo yenkqubo yokubonisa." I-patent yanikezelwa ngo-1970.
Iimvumi zekhompyutha zikhangisa iMarike
Kungekudala, iikhomputha ezenzelwe ukusebenza kunye nemouse zakhishwa. Phakathi kweyokuqala kwakuyi-Xerox Alto, eyayithengiswa ngowe-1973. Iqela kwiSwitzerland Federal Institute of Technology eZurich lathande le ngcamango kwaye yakha inkqubo yekhompyutheni yayo nge mouse ebizwa ngekhompyutha yaseLilith, ithengiswa ngo-1978 ukuya kowe-1980 .
Mhlawumbi becinga ukuba beya kwizinto ezithile, iXerox ilandelwe ngokukhawuleza nge Xerox 8010, ebonisa imouse, i-ethernet yokunxibelelana kunye ne-imeyile phakathi kobuchwepheshe obuhlukahlukeneyo obuye buba ngumgangatho.
Kodwa bekude kube ngo-1983 ukuba imouse yaqala ukuhamba ngokubanzi. Ngaloo nyaka uMicrosoft wahlaziya inkqubo ye-MS-DOS iMicrosoft Word ukwenza i-mouse ifumaneke kwaye iphucule imouse yokuqala ehambisana nePC. Abenzi bekhompyutha ezifana ne- Apple , Atari kunye ne-Commodore baya kulandelelana ngokufanelekileyo neenkqubo ezihambelanayo ze mouse.
Ibhola lokulandelela kunye nezinye iiphambili
Njengazo ezinye iikhompyutha zobugcisa bekhompyutha, imouse iguqukile kakhulu. Ngowe-1972, iNgesi yavelisa "umgca webhola yomgca" owavumela abasebenzisi ukulawula isikhombisi ngokujikeleza ibhola kwisithuba esinqununu. Olunye uphuculo oluthambileyo yi-teknoloji eyenza iifowuni ezingenantambo, into eyenza u-Engelbart akhumbule umboniso wokuqala.
"Siyiphendule ukuze umsila uphume phezulu. Saqala kunye nalo ukuya kwelinye icala, kodwa intambo yaxubha xa ususa ingalo yakho," watsho.
Ngumqambi okhulile emaphethelweni asePortland, e-Oregon kwaye wayethemba ukuba ukuphumelela kwakhe kuya kubongeza kwiinkcukacha zobuninzi behlabathi, imouse ifike indlela ende.
Wathi, "Ndiya kuba mnandi, ukuba ndiyakhuthaza abanye, bazama ukuqonda amaphupha abo, bathi, 'ukuba leli lizwe intsana lingazenza, ndivumele ukuba ndiqhubeke ndihamba.'"
Black Cherry, Umnqophiso oMqoka waseMntla waseMelika
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseCaen
Ukuqhagamshelana nabazali: Gcina iiMqulu zoLwazi
Yintoni Ebangele Ukufudumala Kwehlabathi?